10 Su’aalood Oo La Waydiiyo Kalkaaliyaha/sada Caafimaadka Waqtiga Waraysiga Shaqada Iyo Jawaabahooga - QaranJobs.com - Somali Jobs - somalijobs - qaranjobs - Daily Somalia Jobs
Home/Career Tips/10 Su’aalood Oo La Waydiiyo Kalkaaliyaha/sada Caafimaadka Waqtiga Waraysiga Shaqada Iyo Jawaabahooga
10 Su’aalood Oo La Waydiiyo Kalkaaliyaha/sada Caafimaadka Waqtiga Waraysiga Shaqada Iyo Jawaabahooda
Inta lagu guda jiro wareysiga kalkaaliyaha caafimaadka. Loo shaqeeyuhu wuxuu ku weydiin doonaa su’aalo ku siinaya fursad aad ku muujiso awooddahaaga, aqoontaada, xirfaddahaaga dad ladhaqanka iyo daryeelka aad u huri karto bukaanka. Waxaa ugu fiican in la diyaariyo jawaabaha muujinaya xirfaddahaaga, tababarkaaga iyo waayo-aragnimadaada. Maqaalkani wuxuu iftiiminayaa su’aalaha laga yaabo inaad la kulanto inta lagu guda jiro wareysiga shaqo ee kalkaaliyaha.
Farsamada STAR waxay kaa caawin kartaa inaad maskaxda ku hayso qaabka aad u jawaabayso inta lagu jiro wareysiyada xirfaddeed. Tixgeli saameynta jawaabaha si aad uga jawaabto su’aalaha adoo adeegsanaya qaabkan:
Xaaladda: Sharax asalka tusaalahaaga.
Hawl: Sharax waxa doorkaagu ahaa ee xaaladda ka jiray.
Tallaabo: Sharax tallaabada aad qaaday si aad arrinta wax uga qabato.
Natiijo: Sharax waxaad ka baratay xaaladda iyo natiijooyin wax ku ool ah oo loo helo dadka ku lugta leh iyo shirkaddaada.
Su’aalaha wareysiga kalkaalinta caafimaadka tusaale
Si fiican ma ula shaqaysaa kalkaaliyayaasha kale, dhakhaatiirta iyo hawl wadeenada?
Wadashaqeyntu waa muhiim, waxay muhiim u ah qof walba oo jooga goob shaqo. Waa muhiim in la muujiyo in aad aqoonsan tahay qiimaha ay leedahay wada shaqeynta dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha kale iyo dadka wax qabadku idinka dhexeeyo. Wadashaqeyntu waxay ku siin kartaa waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad kula tacaali karto bukaanka, hubinta waxtarka habraacyada amniga iyo kordhinta qanacsanaanta shaqada. Markaad ka jawaabto su’aashan, xooji dabeecaddahaaga shaqsiyeed, sida wada shaqeynta kooxda, dulqaadka iyo dhageysiga wanaagsan.
Tusaale: “Intii aan ku dhex jiray shaqada caafimaadka ee Cusbitaalka B, waxaan bartay sida ay muhiim u tahay inaad si wanaagsan ula dhaqantid kalkaaliyayaasha kale. Habeen habeennada ka mid ah, bukaan ayaa ii yimid oo ii sheegay inuu daawo naga sugaayay 20 daqiiqo. Cisbataalka ayaan ku cusbaa waqtigaas, sidaa darteed waxaan la hubsaday kalkaalisadiisa ka hor inta aanan go’aansan inaan dawo siiyo. Waxaa ku dhacay bukaanka oo uu qabaa cudurka Alzheimers, kalkaalisadiisa ayaa horay u daawaysay, waqtigaasna ma ahayn waqtigii uu daawo qaadan lahaa. Isdhexgalka, dadladhaqanka iyo xirfadda wada xiriirka ayaa ka caawinaysa kooxaha inay hubiyaan badqabka bukaanka. ”
Sideed u maarayn lahayd bukaan xaalad adag?
Kalkaaliye caafimaad ahaan, waa muhiim inaad yeelato naxariis iyo dulqaad. Bukaannadaadu waxay inta badan la kulmaan xaalado adag, oo saameyn ku yeelan kara dabeecaddooda. Markaad la kulanto bukaan adag, qaado talaabooyin aad ku qanciso. Hubso inaad u maamusho daawadiisa si ku habboon oo aad jadwal ku bixiso. Tixgeli inaad siiso tusaale waqtiga aad la kulantay bukaan adag oo aad ka caawisay hagaajinta natiijada xaalada bukaanka.
Tusaale: “Markaan ku shaqeynayey habeenkii kalkaaliyaha caafimaadka carruurta, waxaan hayay bukaan 15 jir ah oo aan ilaalinayay daryeelkiisa kaasoo aan ka daweyneynay infekshan. Bukaanku wuxuu iigu yeeray qolka dhowr jeer saacad gudaheeda walaacyo kala duwan awgeed. In kasta oo aan gadaal uga dhacayey daryeelkayga loo qorsheeyey bukaannada kale, waan la fadhiistay si aan u weydiiyo sida uu dareemayo. Waxay noqotay inuu ka walwalayo xaaladdiisa oo uusan u baran inuu ka maqnaado guriga. Waxaan ku qaatay dhowr daqiiqo oo aan ku weydiinayay xaaladiisa marka uu guriga guriga jooga oo waxaan u keenay cunto fudud oo dheeraad ah. Intaas ka dib, wuu seexday oo mar dambe la’iima soo wicin ama la’iima soo yeerin inta ka hartay daaweynta. Waxaan bartay inaan fiiriyo wixii ka baxsan dabeecadaha bukaanka ee ku saabsan walwalka salka ku haya.”
Sideed u maareysaa culeyska goobta shaqada?
Marar badan waxa culays ka awood badani ku dhacaa mihnad layaasha caafimaadka ka hawlgalaya dhakhtarrada. Taas oo cadaadis iyo culays badan ku keeni karta nafaha dhakhaatiirta oo ay habboon tahay in kalkaaliyuhu barto maareynteeda. Halkan oo kale waxa muhiim ah in aad kaga jawaabto hababka aad culayskaa u maareyso. Qodobada aad tilmaami karto waxa ka mid ah jimcsi, akhris amma hawlo kale oo kaa daadejin kara culayska shaqo ee kusoo foodsaara.
Tusaale: “Intii aan tababarka ku jiray kalkaalisada, waxaan ka qayb galay aqoon isweydaarsi halkaas oo tababaruhu ku dhiirrigeliyey kalkaaliyayaasha inay horumariyaan oo ay ilaaliyaan caadooyinka taageera caafimaadka. Waxay ku taliyeen in la helo dhaqdhaqaaq jireed (Jimicsi) ama hiwaayad si loo raadsado hab lagu yareeyo buuqa. Waan qaatay taladeeda waxaanan helay goob jimicsi oo bixisa fasalo kala duwan, sidaa darteed had iyo jeer waxaa jira wax cusub oo la isku dayo. Sidoo kale waxaan tabaruc ugu baxnaa aniga iyo asxaabtayda mihnadda caafimaadku xeryaha qaxoontiga ee u baahan kaalmada. Waxaan ogaaday in labadan hiwaayadood ay si wax ku ool ah u yareeyaan walaaceyga. ”
Maxaad sameysaa haddii beddelkaagu iman waayo? ama qofkii shaqada ku bedeli lahaa uu soo habsaamo?
Kalkaaliyeyaasha caafimaad ayaa looga baahan yahay inay sii joogaan shaqada ilaa kalkaaliyaha caafimaad ee xiga uu yimaado. Isbeddelkan ayaa ah in la hubiyo inaysan jirin wax habacsanaan ah oo ku yimaada tayada adeegga ay bixiyaan kalkaaliyayaasha caafimaad. Xalalka qaarkood ee aad ugu deeqi karto xaaladdan waxaa ka mid ah inaad la xiriirto beddelkaaga intaad dhowr daqiiqo ku sii nagaaneysid shaqadaada ama aad raadinaysid qof kale oo mas’uuliyadihiisa daboolaya ka hor inta uusan imaan qofka kula shaqeeya. Waad la hadli kartaa kormeerahaaga haddii ay dhibaato jirto ama beddelkaagu uu soo daaho wax ka badan dhawr jeer.
Tusaale: “Booskeygii iigu dambeeyay ee ICU ee Isbitaalka Magaalada, ma aanan helin bedelkeyga hal habeen. Waxay aheyd dhamaadka shaqadeyda dheer, waxaana diyaar u ahaa inaan aado guriga. Waxaan kala hadlay kormeerahayga arrintaas, waxaanan awoodnay inaan isbeddello ku sameyn karno si aan jadwalkiisa u waafajino waqtigiisa si aanan u habsaamin ka dib marka ay shaqadaydu dhammaato. ”
Sideed u maareyn lahayd khilaaf ka dhasha dhakhtarka?
Markaad ka jawaabto su’aashan, xooji xirfadahaaga shaqsiyeed sida dhageysi firfircoon, wada shaqeyn kooxeed iyo dabacsanaanta xallinta dhibaatooyinka. Jawaabtaada, waxaad dhahdaa waxaad lahadli doontaa kormeerahayga haddii aad caawimaad ubaahantahay.
Tusaale: “Xaalad ayaan la soo kulmay intii aan ka shaqeynayay ER cusbitaal. Habeenno gaar ah ayaan shaqaale la’aani na heysay, qof walbana wuu mashquulsanaa. Habeen habeenada ka mid ah, waxaan eegay waraaqaha bukaan-socodka, daawaduna uma muuqan mid sax ah. Isla markiiba waxaan u sheegay kormeerahayga. Dhakhtarku wuxuu eegay waraaqaha oo wuxuu xaqiijiyay inay khalad samaysay. Waxaan awoodnay inaan saxno warqadda daawada oo aan bukaan-socodka siinno daaweyn sax ah. ”
Sharax sida aad u maamusho culeyska shaqada ee mashquulka badan.
Markaad ka jawaabto su’aashan, muuji sida aad ugu heellan tahay inaad u tagto bukaankaaga inta lagu jiro xaalado kala duwan. Jawaabtaada, waxaad ku bixin kartaa tusaale waqti aad maamushay howlo badan adigoon wax u dhimin hab maamuuska ama nidaamka.
Tusaale: “Waxaa nala shaqaaleeyey waqti gaaban usbuuca dhammaadkiisii xilligii ciidaha waxaan kaloo haysannay bukaanno aad uga badan intii caadiga ahayd. Waxaan ka walwalsanahay inaan dib udhac dheer kuyimid booqashada bukaankeena xaalada shaqaalaha awgeed. Waxaan ku yaboohay inaan sii joogo dhowr saacadood maalintaas, iyo sidoo kale qaar ka mid ah asxaabteyda, si aan u daboolo howlaha harsan. Maalintii oo dhan, kooxdeennu way wada shaqeyn jireen oo is-wargelin jireen haddii aan u baahanno caawimaad ama nasasho. Ugu dambeyntiina, waxaan awoodnay inaan qabanno dhammaan bukaanka. ”
Ma leedahay xiriiro xirfaddeed?
Jawaabtaada su’aashan waa fursad weyn oo aad ku adkeyn karto inaad raadiso fursado aad ku hormarinayso xirfaddahaaga. Tani waa wakhti fiican oo lagu muujiyo aag kasta oo ku yaal codsigaaga shaqada oo ku taxan shahaaddooyin dheeri ah oo aad ka heshay ururadan, siyaabaha aad uga qayb gasho ururadda iyo meelaha qaarkood ee kalkaalinta aad xiisaynayso.
Tusaale: “Waxaan xubin ka ahay Ururka Barayaasha Cudurka Macaanka ee dalka iyo Ururka Kalkaaliyayaasha dalkeena ee Caawiya dadka waaweyn. Waan ku faraxsanahay daryeelka dadka waayeelka ah, waxaanan hubiyaa inaan sii joogo aqoonteyda meelaha aan ka faa’iideysan doono bukaanka duqoobay ee ilaaliya daryeelka. Waxaan dhammeeyey fasal Febraayo iyada oo loo marayo Ururka Barayaasha Cudurka Macaanka ee dalkeena oo ii suurtageliyey inaan horumariyo daryeelka aan u fidiyo bukaanka la halgamaya dheeli tiran la’aanta cunto. Waxaan awooday inaan siiyo ilo uu ku horumariyo nidaam uu ku faraxsan yahay. ”
Sideed u maarayn laheyd dhibaato, sida xanuun dillaaca?
Jawaabtaada su’aashan waa inay muujisaa xirfaddahaaga adag, sida aqoontaada sida wax looga qabto xaaladdaha caafimaad ee gaarka ah iyo xirfaddaha jilicsan sida wada shaqeynta iyo la qabsiga. Jawaab adag, kala hadal awoodaada iskaashi, aqoontaada qotoda dheer ee nidaamka kalkaalinta iyo dareenkaaga si faahfaahsan.
Tusaale: “Kaalinteydii ugu dambeysay ee kalkaaliye caafimaad guud ee waaxda caafimaadka ee magaalada, waxaan dareemay tiro aan caadi aheyn oo bukaan ah oo la imanaya astaamo isku mid ah. Waxaan hogaamiyaa koox aruris ah oo falanqeysa xogta. Waxaa ii soo baxday inay jirto In yar oo muujinaysa in xanuun dilaacay magaaladeena Sababta oo ah warbixinteena kooxda, shaqaalaha ka howlgala xaruntayada ayaa ogaadey astaamaha waxaana la raacay taxaddarka caadiga ah ee xakameynta infekshinka. bukaankeenna iyo ka warbixinta dhacdooyinka. “
Sideed ula dhaqmi laheyd bukaan la halgamaya maaraynta xanuun?
Naxariistu waa xirfad muhiim u ah kalkaaliyayaasha inay isticmaalaan markay la macaamilayaan bukaanada laga yaabo inay la tacaalayaan xanuun. Muuji inaad si dhab ah u qaadatid walaaca bukaankaaga, oo aad siiso tusaale muujinaya inaad ka caawin karto iyaga xagga shucuurta iyo xallinta dhibaatooyinka.
Tusaale: “Kaalinteyda Isbitaalka Magaalada ee ku saabsan umulisada iyo cudurada haweenka, waxaan ku xasuustaa bukaan xanuun la soo dersay muddadii uurka. Waxaan u soo jeediyay talooyin kala duwan oo hurdo iyo iskala bixin, laakiin iyagu ma aysan caawin iyada. Xaaladdaas markii ay dhacday, waxaan warbixinta u gudbiyay dhakhtarkeeda, kaasoo awooday inuu ku taliyo daaweyn dheeraad ah. Marka xigta ee ay soo gasho, waxay ku faraxsan tahay inay soo sheegto in daaweyntu shaqeyneyso, marar dhif ahna ay la kulanto wax xanuun ah. Meelaha kale, waxaan awood u yeeshay inaan u soo bandhigo bukaannada sida barkin dheeri ah ama ka caawiyo telefishanka inta ay sugayaan dhaqtarkooda inuu yimaado. Waxaan had iyo jeer si dhab ah u qaadaa bukaanka markay ii sheegaan xaalad caafimaad darro ah.”
Sideed uga jawaabtaa markay dadku ku weydiistaan ​​talo caafimaad marka aad ka baxsantahay shaqada?
Xirfadle caafimaad ahaan, waxaad la kulmi kartaa saaxiibo kaa doonaya talo ku saabsan waxa laga yeelayo welwelka caafimaad. Waxaa ugu fiican in dadka loo gudbiyo xirfadlayaal caafimaad oo bixin kara talo caafimaad marka hore marka xigtana baaritaan dhameystiran, ogaanshaha iyo daaweynta. Si aad uga jawaabto su’aashan, si kooban uga dood sida aad ugu sheegto asxaabtaan sida ay muhiimka u tahay in laga raadsado talo caafimaad goob caafimaad oo ka timaada xirfadlayaal caafimaad oo heli kara macluumaadka baaritaanka.
Tusaale: “Waxaan helay wicitaan saaxiib oo i weydiinaya astaamaha uu isku arkay ee ku dhacay iyo waxa aan u maleynayay inuu yahay. Ka dib markii aan u sheegay in aanan ka qaadi karin shaybaar cudur goob ka baxsan rugta caafimaad ee aan ka shaqeeyo, ugu dambayntii wuxuu ballan la galay inuu dhakhtarka halkaas ku arko. In kasta oo ay ku habboonaan lahayd inuu isagu jawaab ka helo aniga, had iyo jeer waxaa ugu wanaagsan in bukaannada loola dhaqmo si dhammaystiran, hab xirfad leh sidaa darteed waxaan haynaa dhammaan macluumaadka saxda ah ee aan ku samayn karno waxa ugu fiican bukaannada. ”
U adeegso jawaabahaaga si aad u muujiso awooddaada inaad ilaaliso tayada ugu fiican ee daryeelka bukaankaaga. Marka lagu daro diyaarinta jawaabahaaga, waxaad sidoo kale diyaarin kartaa su’aalo si aad u weydiiso wareystahaaga.
Xuquuqda Qoraalka: Somalijobs